Ukubhekelela izindaba zomnotho waboHlanga – Bayede News
Ukubhekelela izindaba zomnotho waboHlanga
OKUKADE kwenzeka eNingizimu Afrika sekulethe esinye
Uhlobo lwemisebenzi okumele igcinelwe abangumsinsi wokumila Isithombe: nguKim Davies
OKUKADE kwenzeka eNingizimu Afrika sekulethe esinye isithombe ngokumele makwenzeke ezweni ukuze kunqandeke impinda ngesikhathi esizayo. Ngifisa namuhla kesibheke ngeso lezomnotho lesi simo sombhedukazwe esivela kuso. Yize sazi ukuthi izigameko zamaviki amathathu edlule umsuka wazo ubungubugebengu nokudayiswa kwezidakamizwa okwenzeke ePretoria lapho owaseNigeria edubule wabulala uMnu uChauke, kodwa lokhu bekuchambuza ithumba ebelivele linobomvu mayelana nesimo senhlalo yabantu baseNingizimu Afrika ekade besibekezelele. Leli lizwe linazo ezalo izinkinga ezinye phakathi kwazo ezihambisana nokungabi namisebenzi, ubudlova obenziwa yizigelekeqe zangaphakathi kanye nokucwaswa kwaboHlanga phakathi kokuningi. Okunye okufi ke kudale ingxubakaxaka
ukuthutheleka kwabokufi ka asebebalelwa ngaphezu kwezigidi ezinhlanu kuleli. Yize kungama-Afrika avela kumazwe e-Afrika, kukhona amaShayina, amaPakistani nabanye bamanye amazwe. Umbiko obalula lezi zizwe usikhombisa ukuthi ziza kweleNgabadi ngenxa yamadlelo aluhlaza futhi ziza ngenxa yamandla omnotho asekeleke ekukwazini ukuzithuthukisa ngaphandle kwemigomo ebanqandayo ukuthi bahwebe ezweni. Uma sibheka izindlela abahweba ngazo, cishe bahweba kuyoyonke imikhakha yezomnotho ngaphandle kwezingqinamba.
Bagcina sebehweba nasezigabeni ezincane kakhulu ozibonayo nje ukuthi yizigaba lezi mhlawumbe okufanele ngabe kuhweba abantu basemalokishini nasemakhaya. Umbiko obizwa ngokuthi yiGlobal Entrepreneurship Monitor (GEM, 2017/18), okungumqingo wezokuthuthukiswa kosomabhinisi emhlabeni wonke uveza ukuthi, elaseNingizimu Afrika liphansi kakhulu maqondana nezokuqala amabhizinisi uma uliqhathanisa namazwe elingontanganye nawo.
Uma ubheka ngisho amazwe ase-Afrika, leli lizwe lize ledlulwe nangamazwe afana noKenya, neZimbabwe namanye amazwe. Yingakho mhla zingama-27 kuNcwaba uNdunankulu wesifundazwe iGauteng, ehlongoze ukuthi aboHlanga abahlala eGauteng babe nesibonelelo maqondana nezigaba zezomnotho ezithile. Ekuchaza lokhu, uthe kuyovimba isimo esithi masifane nesenzekile lapho kubonakale kukhishwa abantu bokufi ka abanye beshaywa ezindaweni
zabo zokusebenzela. Ezinye izikhalazo bezihambisana nokuthi abokufi ka sebengene bathatha wonke amabhizinisi ngisho nenhlese ebesekuyinsalela yaboHlanga. Isimo esinje asiqali ukwenzeka ezweni elifana neNingizimu Afrika. Izwe elifana ne-Europe, kulukhuni satshe ukuqala ibhizinisi nxa ungowokufi ka. Kanjalo nasezindaweni ezifana noZimbabwe kulindeleke ukuthi izimboni zokuthengiselana zilawulwe kuphela abakhona. Sikhuluma nowaseLesotho uMnu uPaseka Ramakaotsi uye wakuqinisekisa ukuthi kuleli lizwe nakhona kunezigaba zomnotho ezabelwe kuphela abakhona.
Inkinga eba khona yikuthi bona abeSuthu laba, bathi begcina bathengisele abokufi ka amalungelo abo okuhweba. Wenze isibonelo ngendaba yamalayisense ensangu, okuthe ebaphumela bagcina eCairo inezigidigidi ezili-$129. Leli dolobha lihlala abantu abangosozigidi abane kunelaseGoli elinosozigidi bamadola ababili.
Nokho, ukusamele iNingizimu Afrika ikulungise isimo samadolobha amancane nokungenisela kwalo mcebo walamadolobha aziwa ngamakhulu ezweni.